မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့မှ သုခကာရီ ပရဟိတ အသင်းလေး နှင့် အင်တာဗျူး အစီအစဉ် ~ အလွမ်း မင်းသားလေး
08:49 နေဇော် လင်း No comments
အဝေးရောက် မလေးမြေမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဖက်က ပရဟိတ ကိစ္စလေးတွေ တစ်ဖက် တစ်လမ်းက အားတက်သရော လုပ်ဆောင်နေပြီး လူငယ်အသင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့ နာဂါဆာရီ ရပ်ကွက်ရှိ သုခကာရီ အသင်းလေးအား စာဖတ်သူများကို တင်ပြနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် ပီနန်မြို့သို့ သွားရောက်ပြီး သုခကာရီ အသင်း ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အခုလို သိချင်တာလေးတွေကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး = သုခကာရီ အသင်းလေးကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သော နေ့ရက်လေးကို သိပါရစေ ... ဒီမေးခွန်းကိုတော့ သုခကာရီအသင်း ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်အောင် မှ ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုခကာရီ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း ၁၄ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖြစ် တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး = အသင်းလေးကို တည်ထောင်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ အသင်းလေးရဲ့ ရည်ရွှယ်ချက် ဦးတည်ချက် တွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး ...
ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးရဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်လေးတွေကတော့
၁ ။ မြန်မာလူငယ်များတွင် ဘာသာရေး စိတ်ဓါတ်/ဘာသာရေး အသိမြင်ပိုမိုရင့်သန် လာစေရန်
၂ ။ လူငယ်များတွင် အများကျိုးသယ်ပိုးတက်သည့် ပရဟိတ စိတ်ဓါတ်ပိုမိုရှင်သန် လာစေရန်
၃ ။ မြန်မာ လူငယ်များအချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု၊ အပြန်အလှန် ရိုင်းပင်းကူညီမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမိုခိုင်မြဲ လာစေရန်
၄ ။ မိမိတို့၏ လုပ်အားခ လစာငွေဖြင့် ကောင်းမှု ကုသိုလ်တစ်ခုကို လစဉ်ပုံမှန် ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန်
၅ ။ မြန်မာပြည်ရှိ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ၏ ဘ၀ကို စာနာနားလည်တက်စေရန် နှင့် ထို ကလေးငယ်များအတွက် တက်အားသမျှ ကူညီထောက်ပံ့သွားနိုင်ရန်
၆ ။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းရှိ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ နှင့် ဗုဒွဘာသာ နေ့ထူးနေ့မြတ်များတွင် ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင် လုပ်ကိုင်သွားနိုင်ရန်
၇ ။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့ပြီး အတိဒုက္ခ ရောက်နေသော ရွှေညီအစ်ကို မောင်နှမများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကူညီပေး သွားနိုင်ရန်
အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက် ( ၇ ) ချက်ဖြင့် သုခကာရီအသင်းကို ဖွဲ့ စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး = အသင်းလေးကို လူဦးရေ ဘယ်လောက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ဖြစ်လဲ ?
ဟုတ် .... ၂၀၀ ကျော် လောက်ရှိပါတယ်။
မေး = သုခကာရီ အသင်းလေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုလည်း စာဖတ်သူများကို သိအောင် ဖြေကြားပေးပါဦး ... ဒီမေးခွန်းကိုတော့ အသင်းတာဝန်ခံ ၂ ဖြစ်တဲ့ ကိုမြင့်လွင် မှ ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးကို စတည်ဖွဲ့ စည်းပြီး အချိန်မှာ ၂၀၁၁ ၊ ၄ လ ပိုင်း သင်္ကြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ပီနန် ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ စတုဒီသာ အလှူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဝါဆိုလ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က လူငယ်တွေနဲ့ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်တဲ့ အလှူကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တန်ဆောင်မုန်းလ
ရောက်ရင် အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမှာဆိုရင် တရားစခန်း ဝင်သူတွေ ပြီးတော့ ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံပေးခြင်း စတဲ့ အလှူကိစ္စတွေကို စေတနာ တက်သန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပရဟိတ ကိစ္စတွေ မှာဆိုရင် အခု စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့လို အလုပ်အားတဲ့ ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အသင်းရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တွေမှာ အန္တရာယ်ကင်း
ပရိတ် လိုက်ရွက်ပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သာရေး ၊ နာရေး ကိစ္စတွေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ငွေအား လူအားနဲ့ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အခါကြီး ရက်ကြီးလို နေ့ရက်တွေမှာဆိုရင် လုပ်အားဒါန လုပ်ဆောင်တာတွေ ဝတ်ရွတ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်
မိဘမဲ့ ကလေးကိုတွေ ပညာရေးကိစ္စတွေမှာ လှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ လှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ နေရာကတော့ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြောင်းတကာကျောင်းရှိ မိဘမဲ့ ကလေးတွေအတွက် တစ်လတစ်ခါ လှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး = သုခကာရီ ဆိုတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ဆောင်တဲ့ နာမည်လေးကို ဘယ်လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ ရွေးချယ် ပေးဖြစ်လဲ ?
ဒီနာမည်လေးကို ပေးဖြစ်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေဆိုတော့ သုခ ဆိုတာက ချမ်းသာခြင်း + ကာရီ ဆိုတာက အလုပ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဆိုတဲ့ စကားက ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပေါ့ ..... ဒီလို အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုခကာရီဆိုတဲ့ အမည်လေးကို ပေးဖြစ်ပါတယ်။
မေး = အလှူကိစ္စ ပရဟိတတွေကို ရှေ့ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် ရန်ပုံငွေ (မတည်ငွေ) များကို ဘယ်လို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားလဲ ?
အလှူကိစ္စ ပရဟိတတွေကို ရှေ့ဆက် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် အသင်းဝင်ထားတဲ့ လူငယ်တွေဆီက လစဉ် အလှူငွေ တစ်ယောက်ကို ၅ ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ် ကောက်ခံပါတယ်။ အသင်းလေးအတွက် တစ်ခြား ရန်ပုံတွေရှာတာတို့ ထူးထူးထွေထွေ သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတော့ သိပ်အဆင် မပြေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ဆောင်ဖြစ်မှာပါ။
မေး = သုခကာရီ အသင်းလေးကို ဦးစီး ဦးဆောင်နေတဲ့ နာမည်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါဦး ...
ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးကို ဥက္ကဌ တာဝန်ယူပြီး ဦးဆောင်နေတာကတော ကျွန်တော် အောင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်ခံ - ၁ ကတော့ ကိုကျော်စွာဝင်း
တာဝန်ခံ -၂ ကတော့ ကိုမြင့်လွင်
တာဝန်ခံ - ၃ ကတော့ မချို
တာဝန်ခံ - ၄ ကတော့ မမော်လီ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး = ယခုလက်ရှိ ပရဟိတ ကိစ္စတွေ ကူညီပေး ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးပေါ့ တစ်ခုခု ဖြေကြားစေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးက ဘာသာရေး လူမှုရေးကိစ္စတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပါဝင် လုပ်ဆောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အခု မကြာသေးမီ အချိန်က ဘီအမ် ဖားအောက်တောရကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ သုခကာရီ အသင်းလေးမှ သွားရောက်ပြီး အလှူငွေ လှူဒါန်းခြင်း လုပ်အားဒါန လုပ်ဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးမှ မလေးရှား ရင်းဂစ် ၈၀၀၀ ကျော်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
မေး = ပရဟိတ ဆိုတာ အများနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော် နားလည်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ အသင်းဝင် လူတွေအများနဲ့ အဆင်ပြေအောင် သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင် အစ်တို့က တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဦးစီး ဦးဆောင် လူကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လို အရာတွေကို သည်းခံနားလည်ပေးပြီး
လုပ်ဆောင်ဖြစ်သလဲ ? ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ခံ - ၄ ကတော့ မမော်လီ မှ ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါရှင် .... ကျွန်မတို့ရဲ့ အလုပ်က အများနဲ့လုပ်ဆောင်ရတာပါ။ ငွေကြေး အလှူငွေ ကိစ္စတွေမှာ တစ်လ တစ်ခါ ရှင်းတမ်း အနေနဲ့ လူအများ မြင်သာတဲ့ မြန်မာဆိုင်တွေမှာ စာရွှက်တွေ လိုက်လံဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အသင်းဝင် လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ လူအများနဲ့ လုပ်ဆောင်ရတယ် ဆိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့လို ဦးစီး ဦးဆောင်လုပ်တဲ့ လူတွေက သူတို့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အားလုံးကိုပေါ့။
မေး = ရှေ့ဆက်ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိသလဲ ဆိုတာ အွန်လိုင်း ရေဒီယို ပရိသတ်များနဲ့ စာဖတ်သူများ သိအောင် ဖြေကြားပေးပါဦး ...
ရှေ့ဆက် ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
မေး = မလေးရှားရောက် မြန်မာများအတွက် တစ်ခုခု ပြောပေးပါဦး ?
ဟုတ်ကဲ့ ... မလေးရှားရောက် မြန်မာများ အားလုံးပေါ့ ... ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကနေ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို တတ်နိုင်သရွှေ့ တစ်ထောင့်တစ် နေရာကနေ အကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
မေး = သုခကာရီ အသင်းလေးကို ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ လိပ်စာလေးကိုလည်း အသင်းတာဝန်ခံ ကိုမြင့်လွင်မှ ဖြစ်တဲ့ ဖြေကြားပေးပါဦး ....
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုခကာရီ အသင်းလေးကို ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် LORONG 1 No (1) TAMAN NEGGASARI 13600 PRAI , PENANG , MALAYSAI နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို http://thukhakari.blogspot.com/ ဒီနေရာလေးမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပတ်ကတော့ ကိုအောင်အောင် - ၀၁၆ - ၅၀၅၂ ၂၇၁ - ကိုမြင့်လွင် - ၀၁၇ - ၅၈၉၁ ၃၀၉ နဲ့ အီးမေး kyawyaza1985@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အခုလို သိချင်တာ လေးတွေကို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးသော သုခကာရီ အသင်း ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်အောင် ၊ ကိုမြင့်လွင် ၊ မမော်လီ တို့အား ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ပရဟိတကိစ္စတွေကို ရှေ့ဆက် အများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှင် ... ကျွန်မတို့ရဲ့ သုခကာရီ အသင်းလေးကို အခုလို ပီနန်လာရောက်ပြီး အင်တာဗျူး လာရောက် မေးမြန်းပေးတဲ့ ကိုနေဇော်လင်း ကိုလည်းအထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကြောင်း ပြောကြားပါရစေ .... ရှင်....
အင်တာဗျူး လေးနဲ့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ ... မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကိုရောက်တယ် ဆိုရင် သုခကာရီ အသင်းလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါကြောင်း သုခကာရီ ပရဟိတ အသင်းလေးနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးရင်း ဒီတစ်ပတ် အင်တာဗျူး အစီအစဉ်လေးကို ဒီနေရာလေးမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား ....
အင်တာဗျူး အစီအစဉ် အသံဖိုင်အား ကျွန်တော်ရဲ့ ရေဒီယို အစီအစဉ်မှ မလေးစံတော်ချိန် တွင် အွန်လိုင်းမှ ထုပ်လွင့်ပါမည်။ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ည ၉ နာ၇ီခွဲ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ည ၁၂ နာရီတွင် ထုပ်လွင့်ပေးပါမည် ဖြစ်ပါ၍ အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက် နားဆင်နိုင်ပါသည်။